Patrick Vieira Oo Shaaciyey In Mikel Arteta Uu Arsenal Kusoo Kordhiyey Tayo Ka Maqnayd - Gool24.Net
Patrick Vieira Oo Shaaciyey In Mikel Arteta Uu Arsenal Kusoo Kordhiyey Tayo Ka Maqnayd
May 13, 2020 Abdiwahab A. Abeye
Kabtankii hore ee Arsenal ee Patrick Vieira ayaa amaan u jeediyey tababare Mikel Arteta oo uu tilmaamay inuu saamayn degdeg ah ku yeeshay ciyaartoyda kooxdaas.
Arteta ayaa shaqada la wareegay bishii Decembere, waxaana uu soo nooleeyey niyadda ciyaartoyda inkasta oo aanu sare uga soo qaadin booska ay kaga jiraan miiska kala-sarraynta Premier League oo ay sagaalaad ku jiraan, haddana 15 ciyaarood oo uu hoggaamiyey waxa laga badiyey laba ciyaarood oo kaliya.
Halyeygii hore ee kooxda ee Patrick Vieira oo siddeed sannadood oo uu u ciyaaray Arsenal la gaadhay guulaha ay taageereyaashu ku faanaan, muddana soo ahaa kabtan, waxa uu rumaysan in macallinka reer Spain ee Arteta uu hadda kusoo celinayo kooxda niyaddii, tamartii iyo jidkii guusha lagu gaadhayay.
Patrick Vieira oo u warramayey saaxiibkiisii hore ee Arsenal ee Ian Wright oo barnaamij shirkadda Adidas ah ka hadlayay, ayaa waxa uu yidhi: “Marka aad tahay laacib Gunners ah, mar walba waxaad ahaanaysaa Gunner, sidaa darteed waan daawadaa ciyaar kasta oo ay leeyihiin.
“Waxa dhab ahaantii xiisaha lihi waa in Arteta uu soo celinayo tamarkii ayna u muuqdaan inay u ciyaarayaan kooxda, laakiin sidoo kael tababaraha, waxayna ila tahay in taasi muhiim tahay.”
Laacibkan hore ee ku guuleystay Koobka Adduunka, una soo ciyaaray kooxaha Inter Milan, Juventus iyo Manchester City, haddana ah tababaraha kooxda Nice ee horyaalka waddanka Faransiiska ee Nice, iyadoo uu horena usoo layliyey kooxda New York City FC ee waddanka Maryakanka ka dhisan.
Damaciisa tababarenimo oo uu ka hadlay waxa uu sheegay inuu doonayo inuu noqdo macallin kooxdiisu ku guuleysato Champions League oo ay tartamada Yurub ciyaarto, laakiin waqtigan uu joogo kooxda Nice oo uu rumaysan yahay inay tahay middii ku habboonayd isaga.